QORSHAHA BULSHADA MIRA MESA
MIRA MESA COMMUNITY DISCUSSION DRAFT
Qorshe Jaaliyadeed oo Lagu Hagayo Kobaca Mustaqbalka ee Mira Mesa
Magaalada San Diego waxay cusbooneysiineysaa Mira Mesa Community Plan, oo la qaatay 1992. Qorshaha bulshada ee la cusbooneysiiyay wuxuu tixgelin doonaa xaaladaha jira, yoolalka Magaalada oo dhan ee Qorshe Hawleedka Cimilada iyo Qorshaha Guud, iyo yoolalka gaarka ah ee bulshada si loo bixiyo jihada horumarka fog ee bulshada.
HABRAACA CUSUB QORSHE
Fursad Ay Bulshadu Ku Qaabeeyaan Koorsada Mustaqbalka
Cusbooneysiinta Qorshaha Bulshada ee Mira Mesa waxay noqon doontaa geedi socod wadashaqeyn leh fursado soconaya oo loogu talagalay talooyinka dadweynaha Inta lagu jiro howsha cusbooneysiinta, shaqaalaha Waaxda Qorsheynta waxay la shaqeyn doonaan bulshada Mira Mesa iyo dadweynaha si loo aqoonsado loona tixgeliyo su'aalaha muhiimka ah, arrimaha, iyo fursadaha ay ka mid yihiin:
Sidee Mira Mesa u kori doontaa 20-30 sano ee soo socota?
Sidee beeshu sida ugufiican ugu qorsheyn kartaa koritaanka hoyga iyo shaqada?
Waa maxay adeegyada, kaabayaasha dhaqaalaha ama tas-hiilaadka lagama maarmaanka u ah koritaankaas?
Sideen ugu dhisi karnaa saameynta wanaagsan ee dhaqaale ee Mira Mesa?
Aagga Qorsheynta Beesha Mira Mesa (CPA) waa ku dhowaad 10,500 hektar. CPA waxay ku taalaa woqooyiga qaybta dhexe ee Magaalada San Diego inta udhaxeysa Interstate 805 iyo Interstate 15. Halkan guji ama hoos u rog si aad u aragto soohdinta Mira Mesa CPA.
AAGA QORSHEYNTA BEELAHA MIRA MESA
KU NOQDO SHAQADA
Jadwalka Shirka Beesha
Guddiga La-Talinta Cusboonaysiinta Qorshaha Bulshada ee Masa Mesa waxay shirar joogto ah ku qabtaan Maktabadda Dadweynaha ee Mira Mesa Isniinta saddexaad ee bil kasta markay tahay 6:10 pm. Kulamadani waxay fursad u siinayaan guud ahaan bulshada iyo daneeyayaasha kale inay talo ku soo gudbiyaan cusboonaysiinta Qorshaha Beesha. Dib u hubi halkan ama websaydhada degel xilliyeed si aad u aragto liistada dhacdooyinka, ama noo soo dir emayl oo aad weyddiisato inaad ku biirto liiskayaga e-mayl si aad ula socoto taariikhda!
Halkan waa halka aad ka heli karto waxyaabaha la abuuray intii lagu jiray howsha cusbooneysiinta Qorshaha Bulshada ee Mira Mesa.
QORSHE LAGU QORSADAY BULSHADA MIRA MESA
MOBILITY TECHNICAL REPORT
Waaxda Qorshayntu waxay samaysay buug-yare sharraxaya waxa cusbooneysiinta qorshaha bulshada iyo sababta loo cusbooneysiiyo Qorshaha Bulshada ee Mira Mesa.
Halkan guji si aad u aragto buug-yaraha.
Click here to view the Community Discussion Draft.
Click here to view the Draft Plan Figures.
BULSHADA ATLAS: WARBIXIN XAALADO JIRA OO JIRA
Atlaskan Beesha wuxuu siiyaa macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan xaaladaha jira, fursadaha, iyo caqabadaha ka jira aagga Qorsheynta Beesha ee Mira Mesa (CPA) waxayna qeexaysaa rajooyinka mustaqbalka ee bulshada. Ujeedada Atlas-kan ayaa ah kheyraadka layaabka leh, isbeddelada, iyo walwalka halista ah ee xaddidi doona xulashooyinka horumarinta jireed ee muddada-dheer ee Mira Mesa CPA. Atlas waxay bixisaa khariidado, sawirro, jaantusyo, iyo jadwallo ku saabsan isticmaalka dhulka, nidaamka deegaanka, qaabka bulshada, iyo kaabayaasha gaadiidka. Atlas waxaa loo isticmaali doonaa aasaas ahaan:
Fududeynta fikradaha bulshada ee arrimaha qorshaynta, mudnaanta, iyo himilada mustaqbalka;
Qiimeynta arrimaha siyaasadeed iyo xulashooyinka iyo diyaarinta adeegsiga dhulka kale iyo fikradaha gaadiidka;
Dejinta siyaasado iyo ficillo fulin loogu talagalay Qorshaha Beesha ee la cusbooneysiiyay; iyo
Abuuritaanka qaybta dejinta deegaanka ee Warbixinta Saamaynta Deegaanka ee Qorshaha Bulshada.
Atlas-kan wuxuu bixiyaa macluumaad ku saabsan xaaladaha jiray illaa Juun 2018.
Halkan guji si aad u aragto dukumiintiyada Khariidadda Atlas .
QORAALKA QORSHAHA BULSHADA DIIWAANGELINTA GUDDIGA TALADA
Halkan waa halka aad ka heli karto ajendayaasha kulanka, bandhigyada, iyo dukumiintiyada kale ee laga helo Kooxda Qorsheynta Beesha ee Mira Mesa - Kulamada Guddiga La-Talinta Cusbooneysiinta Beesha.
Halkan guji si aad u aragto dhammaan dukumiintiyada.
WARBIXIN KA QAADASHADA BULSHADA BULSHADA KOOWAAD
Si loogu wargaliyo geedi socodka cusboonaysiinta qorshaha, Waaxda Qorshayntu waxay samaysay wacyigalin ballaadhan iyo kaqeybgal bulshada. Warbixintani waxay soo koobaysaa ra'yi-celinta ay Waaxda Qorshayntu heshay oo ay u taagan tahay mudnaanta qaybaha kala-ballaadhan ee dadka ku nool, ka shaqeeya, booqdaana Mira Mesa.
Halkan guji si aad u daawato warbixinta.
Halkan guji si aad u aragto lifaaqa.
SHAQO-BARNAAMIJKA & DIIWAAN-QAADKA IYO MAADDADA
Halkan waa halka aad ka heli karto ajandayaasha kulanka, warbixinnada, bandhigyada, iyo dukumiintiyada kale ee ku saabsan qorshaha aqoon isweydaarsiyada iyo madasha.
ISTICMAALKA DHULKA & DARSIGA DHAQAALAHA
Halkan waa halka aad ka heli karto dhammaan daraasadaha dhaqaalaha ee loo diyaariyey inay qayb ka yihiin geedi socodka cusboonaysiinta qorshaha.
Halkan waa halka aad ka heli karto dhammaan daraasadaha dhaqdhaqaaqa ee loo diyaariyey qayb ka mid ah geedi socodka cusbooneysiinta qorshaha.
Alex Frost, Qorsheeye Sare
Waaxda Qorsheynta Magaalada San Diego
9485 Aero Dr.
Faahfaahintaada si dirqi ah baa loo diray!
Jawaabaha iyo jawaabaha su'aalaha inta badan la isweydiiyo ee ku saabsan Mira Mesa Community Plan Cusboonaysiinta ayaa lagu bixin doonaa boggan. Liiskan waa la cusbooneysiin doonaa xilliyo ka jawaab ah su'aalaha dheeriga ah ee la isweydiiyo iyo weydiimaha ku saabsan geedi socodka.
WAA MAXAY QORSHAHA BULSHADA?
Mira Mesa waa mid ka mid ah 53 goobood ee qorsheynta bulshada ee Magaalada San Diego, mid walbana waxay ka mid tahay Qeybta Isticmaalka Dhulka ee Qorshaha Guud . Qorshayaasha bulshada ayaa bixiya tilmaam adeegsi dhul oo faahfaahsan iyo talooyin ku saabsan goobta-gaar u ah siyaasadda marka loo eego kuwa laga fulin karo heer magaalada oo dhan. Cusbooneysiinta qorshaha bulshada waxay lashaqeysaa Qorshaha Guud si loo gaaro himilooyinka heer magaalo iyo heer bulsho, oo ay kujirto hagida koritaanka iyo horumarka mustaqbalka. Dhammaan qorshooyinka bulshada ee la qaatay waa inay ahaadaan kuwo waafaqsan himilooyinka iyo siyaasadaha Qorshaha Guud.
WAA MAXAY XIDHIIDHKA U DHEXEEYA QORSHEYNTA QARANKA IYO CAP?
Magaaladu waxay qaadatay qorshe hawleed cimilo oo loo xilsaaray (CAP) sanadkii 2015, kaas oo ubaahan in 50% la dhimo qiiqa hawada lagu sii daayo (GHG) marka la gaaro sanadka 2035. Cusbooneysiinta qorshaha bulshada ayaa lashaqeynaya CAP si loo gaaro himilooyinka waara ee magaalada iyo guud ahaan bulshada. horumarka kobaca smart. Dhammaan qorshayaasha bulshada la qaatay waa inay ahaadaan kuwo la jaan qaada yoolalka iyo siyaasadaha Qorshaha Waxqabadka Cimilada Magaalada ee 2015.
MAXAA LOO Cusboonaysiiyay QORSHEKA MIRA MESA?
Mira Mesa Community Plan waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay 1992 - 26 sano ka hor. Tan iyo markaas, dadka iyo shaqaaluhu waxay si dhakhso leh ugu kordheen Mira Mesa, koritaankuna wuu sii socdaa. Xaqiiqdii, shaqaalaynta ayaa 6.6 jeer ka dhakhso badan guryeynta intii udhaxaysay 2010 iyo 2015. Qorshaha bulshada ee la cusbooneysiiyay ayaa bixin doona khariidad waddo oo hagta koritaanka bulshada 20-ka ilaa 30-ka sano ee soo socota. Halkii laga falcelin lahaa baahida isbeddelka joogtada ah, geeddi-socodkani wuxuu ka caawin doonaa magaalada iyo bulshada in ay go'aamiyaan sida Mira Mesa u horumarin doonto mustaqbalka si ay ugu sii socoto inay noqoto mid muhiim u ah shaqaalaynta iyo degganaanshaha Magaalada iyadoo la xoojinayo fursadaha kala duwan ee bulshada waa inay bixiyaan.
WAA MAXAY KOOXDA QORSHEYNTA BEESHA MIRA?
Kooxda Qorsheynta Beesha ee Mira Mesa waa gole ka kooban dadweynaha guud oo ay sameeyeen oo ay aqoonsadeen Golaha Magaalada inay u soo jeediyaan Magaalada talooyin ku saabsan arrimaha isticmaalka dhulka iyo qorshayaasha isticmaalka dhulka ee la xiriira bulshada Mira Mesa, iyo inay qiimeeyaan mashaariic horumarineed sida loogu talo galay inay iswaafajiyaan Mira Mesa Community Plan. Guddiga Qorshaynta Kooxda wuxuu ka kooban yahay kow iyo toban degganeyaasha Mira Mesa, shan milkiileyaal ganacsi oo Masaara ah, iyo saddex milkiileyaal milkiileyaal ah. Xubnaha Kooxda Qorsheynta waxaa loo doortaa afar sano oo xarig ah, iyadoo kala bar la doorto labadii sanaba mar. Laba ka mid ah xubnaha milkiilaha guryaha waxaa magacaabay Kooxda Qorsheynta. Doorashooyinka waxaa la qabtaa bisha 3aad ee sannadka aan tirada lahayn. Kulamada Kooxda Qorsheynta Bulshada ee Mira Mesa waxay ka dhacaan Maktabada Laanta Mira Mesa Isniinta sadexaad ee bil walba 7:00 pm
SIDEE 3 ROOT IYO DHAGAX CARARKU KU HELI KARAAN QORSHEYSAN?
1992 Qorshaha Beesha ee Misha Mesa iyo Qorshaha Masaarida Carroll Canyon - oo ay ansixiyeen Golaha Magaalada 6dii Diseembar, 1994 - wuxuu qeexayaa adeegsiga dhulka ku habboon, tilmaamaha naqshadeynta, heerarka horumarinta, iyo barnaamijka hirgelinta ee horumarinta Carroll Canyon Area.
Tan iyo waagaas, laba horumarin oo qorshaysan ayaa la soo jeediyay: Fenton Master Plan (oo ah halka 3 xididdada laga soo jeediyay) qaybta galbeed ee Carroll Canyon iyo Stone Creek Master Plan ee aagga bari. 3 Xididdada ayaa loo qorsheeyay inay bilaabaan dhismaha mustaqbalka dhow; Stone Creek waxaa la saadaalinayaa inuu go'o dhulka 2030.
Labada horumarineed ee la qorsheeyay ayaa la soo jeediyay ka hor bilowgii Cusbooneysiinta Qorshaha Bulshada ee Mira Mesa, iyadoo la siiyay in labaduba ay waafaqsan yihiin Mira Mesa Community Plan iyo Carroll Canyon Master Plan, 3 Roots iyo Stone Creek ayaa labaduba ka duwan dadaalka hadda socda ee cusbooneysiinta qorshaha bulshada. Si kastaba ha noqotee, natiijooyinka qorshayaashan qorshaha guud waxay ka muuqan doonaan cusbooneysiinta qorshaha bulshada.
SIDEE AYAY XIRIIRADA MARIAMAR GARGAARKA CARRUURTA MIRAMAR UGU XIRIIRAAN QAABSIGA QORSHEYNTA QARANKA EE MIRA MESA?
Mira Mesa Community Cusbooneysiinta Qorsheynta ayaa qeexi doonta aragtida iyo istiraatiijiyadda lagu taageerayo dabeecadda bulshada lana dejinayo yoolalka iyo siyaasadaha wax looga qabanayo isticmaalka dhulka, dhaqdhaqaaqa, qaabeynta magaalooyinka, iyo tas-hiilaadka dadweynaha. Saldhigga Hawada ee Marine Corps (MCAS) Miramar waxay degtaa in ka badan 23,000 acres oo koonfurta ka xigta Mira Mesa. Qeybta Mobility ee Qorshaha Guud ee Magaalada ee la ansixiyay wuxuu ka hadlayaa doorka muhiimka ah ee madaarradu ku leeyihiin wadaha dhaqaalaha San Diego; rakibaadda duulimaadyada militariga sida MCAS Miramar sidoo kale waxay u adeegaan inay yihiin qaybo muhiim ah oo ka tirsan qalabka difaaca qaranka.
Isticmaalka dhulka garoonka diyaaradaha diirad uma saarey cusbooneysiinta ay hoggaamineyso Waaxda Qorsheynta. Cusbooneysiinta qorshaha bulshada ayaa tixgelin doonta in isticmaalka cusub ee dhulku yahay mid habboon oo la jaan qaadi kara meel u dhow MCAS Miramar; si kastaba ha noqotee, cusbooneysiinta qorshaha bulshada ma tixgelin doono adeegsiga kale ee loogu talagalay MCAS Miramar, sidoo kale qorshaha ma cusbooneysiin doono qorshaynta isticmaalka dhulka ama howlaha duulimaadka ee saldhigga.
SIDEE AYAY CODKA GAROONKA DIYAARADU U LOO BAAHAN YAHAY OO AAGA LOOGA HADLAYAA AQOONYAHANKA QORSHEYNTA QORSHAHA BULSHADA?
Jiritaanka garoon diyaaradeed oo firfircoon wuxuu xaddidayaa horumarin ku saabsan meelaha ku hareeraysan qaarkood ee la xiriira dhererka iyo dareenka buuq ee ay tahay in la tixgeliyo inta lagu jiro cusbooneysiinta. Qorshaha iswaafajinta Isticmaalka Dhulka ee MCAS-Miramar waa dukumintiga hagida ah ee dhigaya adeegsiga dhulkaas, dhererkiisa qaab dhismeedka, iyo xaddidaadda cufnaanta dhismaha ee gudaha aagga saamaynta garoonka diyaaradaha ee MCAS Miramar. Magaaladu waxay fulisaa xeerarkan iyada oo loo marayo Aagga Is-dul-qaadka Isticmaalka Dhulka ee Madaarka , oo ku jira Cutubka 13, qodobka 2, Qaybta 15 ee Xeerka Dawladda Hoose ee San Diego .
Goobta caqabadaha MCAS Miramar, iyo soo koobista xaddidaadaha iyo xaddidaadaha la xiriira aagagga dusha sare iyo buuqyada wareega, ayaa looga doodi doonaa qabyo-qoraalka Khariidadda Atlas - qabyo-qoraalka Khariidadda Atlas ayaa la daabici doonaa dayrta 2018. Iyadoo qayb ka ah cusbooneysiinta Mira Mesa Qorshaha Beesha, Magaaladu waxay u gudbin doontaa qabyo qoraalka qorshaha bulshada, xeerarka horumarinta, iyo soonaha Komishanka Isticmaalka Dhulka Madaarka (ALUC) si dib loogu eego qorshaha iswaafajinta Isticmaalka Dhulka ee Madaarka, oo waafaqsan Nidaamka LU-G.2 ee Qorshaha Guud ee Dhulka. iyo Cunsurka Qorsheynta Bulshada.
MA JIRA Qadka LOOGU TALAGALAY MIRA MESA?
Ururka San Diego ee Dowladaha (SANDAG), oo ah wakaaladda qorshaynta gobolka, ayaa bixisa qaab isku xidhka isticmaalka dhulkeena iyo nidaamyadayada gaadiidka. Qorshaha Gaadiidka ee Gobolka ee hadda (RTP) ma tilmaamayo iskuxirnaanta tareennada mustaqbalka, laakiin waxay kujirtaa waddo laga yaabo inay ka timaaddo UCSD illaa aagga shaqada ee Sorrento Mesa sida lagu xusay Daraasadda Suurtagalnimada Daraasadda ee Sorrento Valley .
MAXAA KU SAABSAN jardiinooyin?
Dadaallada lagu doonayo in lagu horumariyo aragtida Magaalada oo dhan ee ah jardiinooyinka iyo nidaamka madadaalada, Magaaladu hadda waxay ku jirtaa geeddi-socodka abuuritaanka Qorshaha Guud ee Beerta . The Parks Master Plan waa geedi socod ka duwan cusboonaysiinta qorshaha bulshada. In kasta oo Qorshaha Master Parks uu gacan ka geysan doono bixinta mabaadi'da hagidda ee la xiriira jardiinooyinka iyo madadaalada Magaalada, cusbooneysiinta qorshaha bulshada waxay lahaan doontaa cunsur madadaalo oo diiradda saaraya beel gaar ah iyo baahiyo madadaalo.
SIDEE AYAA GAADHLIGA GAADIIDKA AH (AV) IYO GAADHLIGA KU XIDHAN (CV) UGU XIRIIRAAN QAABSIGA QORSHEYNTA QARANKA MIRA MESA?
Magaalada San Diego waxay ku dari doontaa macluumaadka CV / AV cusbooneysiinta qorshaha bulshada. In kasta oo Magaaladu ay ku jiri doonto siyaasado taageera AV / CV, codsiyada gaarka ah iyo hagaajinta la xidhiidha ama waafajinta bulshada dhexdeeda marka laga eego isticmaalka dhulka ama aragtida gaadiidka waxay ku tiirsanaan doontaa natiijooyinka federaalka, gobolka, iyo qorshaynta gobolka, qaabaynta, tijaabinta, iyo dadaalka hawlgallada hadda socda. Cusbooneysiinta Qorshaha Bulshada ee Mira Mesa waxay la jaan qaadi doontaa siyaasadahaan oo ay ku dari doontaa luqadda ku habboon. Ujeedada cusbooneysiinta Qorshaha Beesha ee ku saabsan CV / AV waxay noqon doontaa in la kordhiyo waxtarkooda iyo faa'iidooyinkooda iyadoo si caqligal ah magaalada oo dhan loo geynayo.
SIDEE AYAAN LOOGU SHAQAYN KARAA QORSHEYNTA QARANKA MIRA?
Wax ku darsiga bulshada waa qayb muhiim ka ah cusboonaysiinta qorshaha. Codkaagu waa muhiim! Fursadaha kaqeybgalka dadweynaha waxaa lagu dari doonaa inta lagu gudajiro geedi socodka qorshaynta iyada oo loo marayo: daabacaadda dukumintiyada qorshaha, casuumaada kaqeybgalka shirarka iyo aqoon isweydaarsiyada, fursada looga jawaabayo sahanada khadka tooska ah, fursada lagu soo gudbin karo faallooyinka dadweynaha, awooda lagu codsado bandhig kooxdaada ama ururkaaga, iyo suurtogalnimada inay gacan ka geysato ku faafinta baraha bulshada.
Ku qor hoosta si aad u hesho ogeysiisyo ku saabsan Cusbooneysiinta Qorshaha Bulshada ee Mira Mesa!
Websaytka Cusbooneysiinta Qorshaha Bulshada ee Mesa Mesa waxaa loogu talagalay Qeybta 508 iyo Tilmaamaha Helitaanka Mawduucyada Websaydhka (WCAG 2.0) iyada oo maanka lagu hayo in laga dhigo waxyaabaha ku jira webka ay heli karaan dadka naafada ah (u hoggaansanaanta ADA).
Qaabka Dukumentiga La Qaadan Karo (PDF)
Adobe, sameeyayaasha Acrobat Reader ee dukumiintiyada PDF, waxay soo saareen qalab lagu caawinayo dadka isticmaala indhoolayaasha iyo araga naafada ah. Fadlan booqo Adobe Accessibility (link is external) wixii macluumaad dheeraad ah.
Adobe sidoo kale waxay siisaa qalab beddelaad toos ah oo toos ah dukumiintiyada Adobe PDF. Wax dheeri ah ka baro http://access.adobe.com/access/ (link is external).
Haddii aad naafo tahay oo aad u baahan tahay caawimaad ka helitaanka macluumaadka websaydhkayaga, fadlan nagala soo xiriir NCausman@sandiego.gov . Fadlan bixi waxyaabaha soo socda:
Magaca agabka ama dukumintiga la codsaday
Qaabka aad doorbiday (elektiroonig, daabacaad balaaran, iwm)
Magacaaga, lambarka taleefankaaga iyo cinwaanka emaylka si aan kuu helno.
Isbedelka Cabirka qoraalka
Waxaad si dhakhso ah u kordhin kartaa cabbirka qoraalka ee boggeena internetka adigoo haysta furaha Ctrl oo riixaya + furaha. Si loo yareeyo cabbirka qoraalka, hoos u dhig fure Ctrl oo riix - fure.
2018 Waxaa qoray MiraMesaCPU. Si sharaf leh loogu abuuray Wix.com